Fampiharana eo amin'ny sehatry ny hatsarana sy ny anti-ketrona
Ny hoditry ny olombelona dia manana rafitra mando voajanahary, misy rano, singa manosotra voajanahary (NMF), ary lipida hitazomana ny stratum corneum amin'ny haavon'ny rano iray ary hitazomana ny hoditra ho mando. Ny fisehoan'ny hoditra dia mifandraika amin'ny atin'ny hamandoan'ny stratum corneum. Ny hoditra normal stratum corneum matetika dia misy rano 10% ka hatramin'ny 30% hitazonana ny halemem-panahy sy ny fahamendrehan'ny hoditra. Rehefa mihantitra ny hoditra, mitombo ny fahaverezan'ny rano. Rehefa mihena latsaky ny 10% ny atin'ny rano dia hanjavona ny fihenjanan'ny hoditra sy ny famirapiratany, hiala mora kokoa ny stratum corneum, ary ho maina sy ho maloka ny hoditra, ary hitranga ny ketrona.
Amin'ny ankapobeny, ny vokatra tsara manohitra ny ketrona dia tratra amin'ny alàlan'ny fampidirana moisturizer na fampiasana azy miaraka amin'ny moisturizer. Ny moisturistes amin'ny cosmetika dia manondro ireo zavatra izay afaka mandray na mitazona ny rano amin'ny alàlan'ny vondrona polar ao amin'ny firafitry ny molekiola, mba hahafahan'ny hoditra mahazo vokatra mamontsina. Ny Humectants dia afaka misoroka ny fahaverezan'ny hamandoana ao amin'ny epidermal stratum corneum, ary mitazona ny hamandoan'ny kosmetika mihitsy, manampy amin'ny fitazonana ny fitoniana amin'ny rafitry ny vokatra iray manontolo.
Fampiharana amin'ny sehatry ny fametahana mangatsiaka hatsaran-tarehy
Ny hydrogel dia afaka mamoy rano amin'ny alàlan'ny gel mba hampihenana ny mari-pana ambonin'ny tany. Avo amin'ny ankapobeny ny atin'ny hydrogel hatsaran-tarehy, mahatratra 95% eo ho eo. Afaka mahomby amin'ny fomba mahomby ny vokatry ny compresse mangatsiaka amin'ny alàlan'ny fahaverezan'ny rano. Ny compresse mangatsiaka dia afaka mampihena haingana ny fivontosan'ny tarehy mivonto, ary ampiarahina amin'ny fampiakarana dia mety hisy vokany tsara.
Ny firafitra sy ny mampiavaka ny hydrogel tsara tarehy sy fikolokoloana ny hoditra
Amin'izao fotoana izao, ny andiana hydrogel anti-ketrona dia miara-mandroso amin'ireo mpanjifantsika any Guangzhou. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nanatsara hatrany ny firafitry ny vokatra izahay ary nanandrana fitambarana samihafa hivoatra ho vokatra ankehitriny. Ny vokatray dia vokatra eken'ny tsena ary manana fifaninanana matanjaka
Ny hydrogel fikarakarana hoditra dia vita amin'ny sodium polyacrylate ho akora fototra, izay novidiana tamin'ny Sumitomo Chemical Co., Ltd. any Japon. Miorina amin'ity kalitao faran'izay matanjaka avy any Japon ity, ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra hydrogel dia afaka mitazona hatrany, Mahasoa amin'ny fiaraha-miasa sy fampandrosoana maharitra.
Famotsorana ambany, hypoallergenic, biocompatibility tsara, cytotoxicity ambany
Mampitony, manosotra, mangatsiaka, manohitra ketrona, mampiakatra.
Patch ny masom-baravarana, valanorano nasolabial, tampoka ketrona, tampoka ketrona, sarontava tarehy, volo mihantona amin'ny sofina V
(sticker amin'ny masony, sticker aforitra Nasolabial, sticker amin'ny kentrona amin'ny handrina, sticker amin'ny ketrona amin'ny vozona, sarontava amin'ny tarehy, V tariby mihantona amin'ny sofina V)